Snowflake inoshambidza yako denim ...
Zvekusarudzika kwemavara, isu tine ruzivo kwazvo. Mumwaka uno, isu tinosarudza rakakurumbira uye rakakosha ruvara kupa vatengi sarudzo dzakasiyana. Yakapfava uye inodziya teddy bvudzi jira isarudzo yakanaka munguva yechando. Isu tinoshandisa 260g jira remuviri riine 210T lining uye yakapetwa kaviri 2 × 2 mbabvu pane cuff uye hem. Chitarisiko chakanakisa, uyezve nekuda kwemutengo wemukana wedu, ichave yekutengesa kwedu kwakanyanya mwaka uno. SIZE: Makore 2-8
Isu takapihwa mvumo neDisney kwemakore mazhinji kugadzira zvigadzirwa zveDisney, kunyanya kusanganisira zvipfeko zvevasikana nevakomana.
Zvigadzirwa zveDenim zvinokwikwidza zvigadzirwa kwatiri. Tine mirairo yakawanda yedhinhi inogadzira gore rese izvo zvinoitawo kuti tive nemakwikwi makuru mumachira uye nekushanda. Iri dema dema bhachi, isu tinoshandisa rinorema CVC denim mu10.5 oz, vane makore kubva kuvacheche vakomana kuenda kune vakomana vakuru vane yakanaka chando yekuwachisa maitiro uye hoody dhizaini, iri inozivikanwa kwazvo chimiro muzhizha.
Mapfekero evasikana anotengesa zvakanyanya muzhizha uye zvakare ndeimwe yedu huru yekusimudzira chigadzirwa. Isu takasarudza uye toshandisa chiffon machira kugadzira chikamu chepamusoro chehembe icho chinopeta-kuramba uye chakakodzera zhizha. Chikamu chejasi chakagadzirwa nematanho maviri emachira machira ane mabheji anopenya anoenderana uye akangwara. Iyo lining inogadzirwa neT / C single jersey iyo yakagadzikana kupfeka padyo nemuviri. Kune akasarudzika akagadzirwa madiki mabhatani kumashure kweshure anoita kuti zvive nyore kuapfeka pa ...